यी हुन् अभिनेत्री बेनिशा हमाललाई प्रभाव पार्ने पाँच पुरुष - Everest Dainik - News from Nepal
यी हुन् अभिनेत्री बेनिशा हमाललाई प्रभाव पार्ने पाँच पुरुष
मानिसको जीवन अनेक नाता अनि सम्बन्धमा जेलिएको हुन्छ । कतिपय व्यक्तिले मानिसको करिअरमा विशेष अर्थ राख्छ । कोही रगतको नातासँग जोडिएका हुन्छन् त कोही भावनासँग । अभिनेत्री बेनिशा हमाललाई जीवनमा आफ्नाबाट पाउने माया, साथ र प्रेरणामा कमी भएको छैन । पारिवारिक साथ सहयोगले उनलाई सधैं मार्गदर्शन गरिरह्यो । कार्यक्षेत्र अर्थात् करिअरका लागि केही पुरुषले उनको जीवनमा प्रभाव पारेका छन् । विशेष भूमिका खेलेका छन् जसको प्रेरणाबाट उनले जीवनमा धेरै सिक्ने मौका पाइन् । उनको जीवनमा प्रभाव पार्ने पाँच पुरुष को को हुन् त ?
१. रविन श्रेष्ठ
रविन मेरो बेस्ट फ्रेन्ड हो । एउटा राम्रो निर्देशक र सम्पादक अनि विश्वासिलो पात्र पनि । जीवनमा एकदमै कम भेटिने रविन त्यस्तो व्यक्ति हो जसलाई म आँखा चिम्लेर विश्वास गर्न सक्छु । मलाई सीधा कुरा गर्ने मान्छे मन पर्छ । रविन ‘स्ट्रेट फरवार्ड’ छ । लुकाएर कुरा गर्ने बानी छैन । मन परे नपरेको कुरा सीधै भन्छ । ऊसँग मित्रता गाँसिएको सात वर्ष भइसक्यो । यति वर्ष भइसक्दा पनि ऊसँगको मित्रतामा सुरुको दिनको जत्तिकै ‘चार्म’ छ ।
२. मिलन चाम्स
चलचित्र उद्योगमा उहाँ मेरो अभिभावकजस्तो लाग्छ । चलचित्र क्षेत्रमा उहाँ जत्तिको व्यावसायिक मान्छे देखेको छैन । उहाँको सबभन्दा राम्रो पक्ष व्यावसायिकता हो । प्राविधिकदेखि कलाकार सबै टिमसँग असाध्यै राम्रो व्यवहार गर्नुहुन्छ । सबैलाई सम्मान दिने बानी छ । भविष्यमा चलचित्र निर्माता भएँ भने उहाँको यो बानी ‘फलो’ गर्छु । काममा उहाँको मेहनत र लगाव देखेर छक्क पर्छु । सल्लाह सुझाव दिइरहनुहुन्छ । समयलाई महत्व दिने बानी राम्रो लाग्छ । बोलाएको ठाउँमा कत्ति पनि तलमाथि नगरी सही समयमा पुग्नुहुन्छ ।
३. मीनबहादुर भाम
आफ्नो चरित्रमा कसरी काम गर्ने भनेर उहाँबाट सिकेकी छु । काम गर्न खोज्दा जोसुकैलाई पनि ‘प्रेसर’ महसुस हुन्छ । उहाँले हरेक कामलाई शान्त भएर सम्हाल्न सिकाउनुहुन्छ । हरेक चीजलाई साधारण रूपले हेर्नुहुन्छ । ‘जीवनलाई सरल रूपले जिउनुपर्छ’ भनेर सिकाउनुभएको छ । म जस्तो थिएँ, अझै राम्रो बनाउन उहाँको महत्वपूर्ण भूमिका छ । मेरो करिअर र व्यक्तिगत जीवनमा उहाँको प्रभाव छ ।
४. आदित्य ठाकुर
उहाँलाई सानो उमेरमा भेटेकी हुँ । चितवनबाट भर्खर काठमाडौं आउँदा यहाँको वातावरणमा घुलमिल हुन गाह्रो भएको थियो । उहाँले नै यो वातावरणसँग परिचित हुन सिकाउनुभयो । मलाई आममान्छे, मिडिया आदिलाई कसरी सम्हाल्ने भन्ने थाहा थिएन । सानो विषयमा विवादित समाचार आउँदा त्यसलाई ‘ह्यान्डल’ गर्न जान्दिनथेँ । त्यति बेला मेरो लागि ‘इमोसनल सपोर्ट सिस्टम’ उहाँ हुनुहुन्थ्यो ।
५. सुरजसिंह ठकुरी
पहिला सञ्चारकर्मी भएकाले होला, त्यति बेलैदेखि उहाँको काम मन पथ्र्यो । म पनि त्यस्तै प्रकारको कार्यक्रम चलाउँथेँ । धेरैपटक भेटेकी छु । हरेक भेट प्रेरणादायी लाग्यो । उहाँको काम गर्ने तरिका, कार्यक्रम चलाउने शैली र व्यक्तित्वबाट प्रभावित छु ।
ट्याग्स: benisa hamal